PDO Pre-College Program Capacity Building Camp | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
PDO Pre-College Program Capacity Building Camp
Posted on December 30, 2017 by MYEO in Local, Training //0Comments
Duration: 6th – 7th January 2018 (8am – 4pm)
Funding: 15000 ks, self funded
Location: မုဒိတာ ခန်းမ၊ ဖောင်တော်ဦး ဘုန်းတော်ကြီး ပညာရေးကျောင်း၊ ၁၉ လမ်း နှင့် ၅၉ လမ်း၊ နန်းရှေ့၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို Self-study လုပ်ဖို့နည်းလမ်းကောင်းတွေ၊ Resources တွေ ရယူလိုပါသလား? လူအများကြား ပြောရဲဆိုရဲရှိပြီး ပရိတ်သတ်နှစ်ခြိုက်တဲ့ စကားပြောဆိုသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လိုပါသလား? Facebook မှ တဆင့် မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖွဲ့ပြီး Facebook ကို Personal & Professional Development အတွက် အသုံးပြုလိုပါသလား? နိုင်ငံခြား ကျောင်းတက်လိုပါသလား? ပညာသင်ဆုလျှောက်လိုပါသလား? Leader of Tomorrow တင်မဟုတ်ဘဲ Leader of Today ဖြစ်လိုပါသလား?
PDO Pre-College မှ ဦးစီးတဲ့ Capacity Building Week မှာပါဝင်လိုက်ပါ။
နှစ်ရက်တာအတွင်း ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာနှင့် ဆရာ/ ဆရာမများ
1. Face your Fear in Learning English ( Ceylin Ozulu)
2. Intercultural Communication (Ko Chit Thu)
3. Study Abroad, but how? (Zun New Tun Oo)
4. Impactful Public Speaking: How to command an Audience (Jennifer Tietz)
5. Steps into being the leader of Today (Aung Myin Thu)
6. Exploring Future Plan in student life (Aung Myin Thu)
7. Facebooking for Professional Purpose (Aung Myin Thu)
သင်တန်းအား အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ပို့ချမည်ဖြစ်ပီး Participatory Learning Approaches များအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းသို့တက်ရောက်သူတိုင်း IELTS & Communicative English Self-study ၆ လစာ Package အား အခမဲ့ မျှဝေသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Eligibilities: Open for all
Registration ပြုလုပ်လိုပါက 09-966707118 သို့ တက်ရောက်မည့်သူ၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ‘For CBC’ ဟု message ပေးပို့ရပါမည်။
Location: မုဒိတာ ခနျးမ၊ ဖောငျတျောဦး ဘုနျးတျောကွီး ပညာရေးကြောငျး၊ ၁၉ လမျး နှငျ့ ၅၉ လမျး၊ နနျးရှေ့၊အောငျမွသောစံမွို့နယျ၊ မန်တလေးမွို့။
အင်ျဂလိပျစကားပွောကို Self-study လုပျဖို့နညျးလမျးကောငျးတှေ၊ Resources တှေ ရယူလိုပါသလား? လူအမြားကွား ပွောရဲဆိုရဲရှိပွီး ပရိတျသတျနှဈခွိုကျတဲ့ စကားပွောဆိုသူ တဈယောကျဖွဈလိုပါသလား? Facebook မှ တဆငျ့ မိတျဆှကေောငျးတှဖှေဲ့ပွီး Facebook ကို Personal & Professional Development အတှကျ အသုံးပွုလိုပါသလား? နိုငျငံခွား ကြောငျးတကျလိုပါသလား? ပညာသငျဆုလြှောကျလိုပါသလား? Leader of Tomorrow တငျမဟုတျဘဲ Leader of Today ဖွဈလိုပါသလား?
PDO Pre-College မှ ဦးစီးတဲ့ Capacity Building Week မှာ
နှဈရကျတာအတှငျး ဆှေးနှေးမညျ့ အကွောငျးအရာနှငျ့ ဆရာ/ ဆရာမမြား
သငျတနျးအား အင်ျဂလိပျ၊ မွနျမာ နှဈဘာသာဖွငျ့ ပို့ခမြညျဖွဈပီး Participatory Learning Approaches မြားအသုံးပွုမညျဖွဈပါသညျ။
သငျတနျးသို့တကျရောကျသူတိုငျး IELTS & Communicative English Self-study ၆ လစာ Package အား အခမဲ့ မြှဝသှေားမညျဖွဈပါသညျ။
Registration ပွုလုပျလိုပါက 09-966707118 သို့ တကျရောကျမညျ့သူ၊ ဆကျသှယျရမညျ့ ဖုနျးနံပါတျကို ‘For CBC’ ဟု message ပေးပို့ရပါမညျ။
Ko Aung Myin Thu (09-966707118)
U Chit Thu (09-799944998)